कात्रोमा खल्ति नहुनेरहेछ ! – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित: २०७४ पुष २२ गते १९:११
तेरो र मेरो । फलानाको यस्तो, ढिस्कानाको त उस्तो । म पराइ, तपाईं आफन्त । अचम्मको छ, यो संसारको रीत । “हेर, रामे पढेको, रात भारी बत्ती झिपिक्कै नपारी पढ्या र’च । हाम्रो चाँही !” एकाबिहानै पधेंर जांदा बत्ती बलेको देखि हजुरआमाको रिस हो यो, आफ्नै दुई नाती बीचको । बत्ती बाले रामे पराइ, नपढ्ने श्याम आफ्नु । आबैको गजबको भेदभाब । आबैको मायाले केही फुरुक्क देखिए पनि अल्छी श्यामे सम्झदो हो, आफ्नै कोखका दुई फरक छोराका हामी छोराहरु बीच किन आबैको फरक माया ? हो, यसरी नजानिंदो तरिकाले डेरा गाड्न थाल्दो रहेछ, मान्छेको मनमा इर्श्याले । राजाका जहानमा जन्मेका राजकुमारहरु होउन्, वा कटेराको छेउमा जन्मेका निमुखा हुन्, मात्रा मात्रै फरक, चिज हुंदोरहेछ, इर्श्याको ।
जब मान्छे ठुलो हुन्छ, परिवारमा सिकेको बानी र इर्श्यालाई फोटोकपी गर्न थाल्छ । रवाफ र घमन्ड माथि इर्श्याले राज गर्‍यो भने चितवनको लजमा सुजाताको ज्वाँई र पारसको गोली काण्ड जस्तो घटनाले स्थान पाउंछ । हावामा हानेको पारसको त्यो गोली ‘ज्वाइं बिचरो’लाई लागेको भए, यो धर्तिबाट बिदा !!! अनी अबैध रुपमा नेपालमा बसेर दुई नम्बरी काम गर्ने उसको सपना चकनाचुर ! धन्न बांच्यो, अब सासूले हेर्लिन नि, ज्वाइसाहेबलाई पैसा कमाउने धन्दाका अबसरहरु । एउटी महिला शिक्षिकाले निरन्तर आफुमाथी शक्तिको भरमा बलत्कार गरेको आरोपमा छुरा रोपेर मारिदिइन, भारतका एक सांसदलाई । शक्तिको भरमा गाउंकी सोझी महिलालाई बलत्कार गर्ने बिहारीले ज्यान गुमायो । पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका गभर्नरलाई आफ्नै अङ्गरक्षकले आज गोली हानी मारिदियो । जीवन मरणको सजाय पाएको पापीलाई बचाउन खोजेकोले गार्डले ६ गोली ठोकेको रे ! तर हाम्रो मुलुकका एउटा इमान्दार प्रहरीले समाएको अबैध पजेरोका भोकाहरु बन्दुकको भरमा प्रहरी अड्डामा चाबी बुझ्न शरम मान्दैनन्, कोहि यिनीहरुलाई गोली ठोक्नेहरु ? जहाज बेच्न खोज्नेहरु, जहाज किनेर कमिशन खाने र खान खोज्ने तस्करहरु, पत्रकार मार्ने हत्याराहरु, आफ्नै चेली बेच्ने पिपाशुहरु, भ्रश्टचारी र घूसखोरीहरुलाई जांकेर चिस्याउनेहरु खोइ ? कांग्रेसमा गगन थापा छन्, यिनी कहीले माथि आउने ?, जहाँ परिवारबाद मात्रै लागु हुन्छ । माओबादिका बाबुरामलाई कहिल्यै माथि आउन दिएनन, बन्दुकेहरुले । निर्बिकल्प प्रधानमन्त्री उनका हरेक काम लाग्ने बिषयहरु केबल ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बनेर थन्किन्छ, जहाँ राणाबाद लागु हुन्छ । बरु पोइल आका प्रकाशहरुको बोलवाला हुन्छ तर डा. साहेबलाई कोहि सुन्दैनन । प्रहरीका रमेश खरेलले केही गर्लान भन्ने आश् थियो, चाकरिवाजको कारखाना नेपाल पुलिस । रावल र चन्दका भरौटे पुरस्क्रित, खरेल बिदामा ।
माथिका उदाहरण र सत्य चिजहरु जिबनमा मान्छेले पाउने कर्म रहेछ । जिम्मेवारी र कर्म सत्य सम्झेर गर्नेहरु जिन्दगीमा हार्दैनन भने सांसद भएर शिक्षिका बलत्कार गर्नेहरु, शक्तिको भरमा लाशमाथी राजनीति गर्नेहरु नै हुन, असफल हुने । सबैलाई थाहा छ, जिबनमा मरी लाने केही छैन । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखीको सम्पत्ति सोरेका राजा बिरेन्द्रको बंशै सखाप भो । त्यत्रो तागत भा’का तिनैका भाईलाई नपुग्दो के थियो र ? आज एउटा डांडांमा जोगी भएर बस्नु परेको छ । तिनी भन्दा चैनले बसेका छन, पल्लो पाटोमा बरु ओशो आश्रमका गुरुहरु । त्यसैले जन्मेर मान्छेले लाने भनेको सम्झना मात्र रहेछ । अरुले सम्झेर स्वर्गमा लाग्ने बाडुल्की रहेछ, जिन्दगीको धन । पैसा-पैसा भनेर नेपालको बिल गेटस बन्ने सपना बोकेका नारायण सिंह पुनलाई एक चम्चा ग्लुकोज खुवाउने मान्छे भएन रे, मर्ने बेलामा । उनका तरुनीहरु त नेपालको एउटा राम्रै पार्टीको भाइ संगठनका कार्यकर्ताहरु जति थिए रे । पैसाका पछाडि दकुरेका ती ‘दुइ दिनेहरु’ पुनलाई ओखती खुवाउन्जेल के बस्थे र ? भारतको अस्पतालमा रोइ रोइ प्राण त्यागे, बिचरा पुनले । नेपाली राजनेताका भन्दा बढी पावर चलाउने मोहन खेतान मरे, न गोरखा ब्रुवरी संगै गयो, न त पैसाको मारबाडी बोरा नै । रित्तो हात गए उनी पनि । सबैको प्राण केबल प्राण मात्रै त्यागेर जान्छ । मारबाडी, नेता, भ्रस्टाचारी, तपाईं, हामी सबैको ।
अपराध गरेर बनेको भारतिय ती सांसदको मरण पनि मरण्, माहात्मा गान्धीको पनि मरण । अङगरक्षकको गोलीले मर्ने गभर्नरको पनि मरण, बेनिजिर भुट्टोको पनि मरण । मिर्जा दिलसा बेगको पनि मरण, बी पी कोइरालाको पनि मरण । समर्पणमा जस्सका जिन्दगी त्यागले बिते, तिनका जिन्दगी सफल । बेइमान र रवाफले मर्ने बेलामा जेरि-जुलाफी दिंदोरहेनछ । मरेका सहि आत्माका सम्झना पो जिन्दगी, धनको रवाफले अडेको के जिन्दगी ? आफुले दुध हालेको चिया पिए, निमुखालाई कालो चिया पिलाउने साहस पो जिन्दगि, खीरको खाएर सुकुम्बासी बस्तिमा झुसीले डकार डकार्नेको के जिन्दगी ? झुपरीको सुखद दाम्पत्य पो जिन्दगि, आलिशान महलका महंगा बत्ती र फर्निचर भांचिने झगडाको के जिन्दगी ? संबिधान नै नलेखिएको बेलायती कानुनी राजको जनताको पो जिन्दगी, हाम्रा पसिना र करले एउटा मिटिङ्गमा जांदा तीन चोटि खाने अनी हामीलाई स्संबिधान नदिने ६०१ बेइज्जेतीहरुको के जिन्दगी ? त्यसो त जसले जसरी निर्बाह गरे पनि लास्टां कसैले साथमा लाने केही कुरो बनेको रहेनछ, यो धर्तिमा किनकी कात्रोमा खल्ती नहुने रहेछ ।